दुर्गेश थापाको छाडा गितलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाएर पक्राउ गरियोस ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचार समाजदुर्गेश थापाको छाडा गितलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाएर पक्राउ गरियोस !
काठमाडौं – गायक दुर्गेश थापाले हालै ‘द मास्कर’ बोलको गीत युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरे लगतै बिबादित बनेको छ । यो गीत रिलिज लगत्तै गीत हेर्ने/सुन्ने नेपालीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।दुर्गेशले सोमबार सार्वजनिक गरेको गीतमा हजारभन्दा बढी प्रतिक्रिया आएका छन् । तीमध्ये केहीले यो गीत निकै दमदार भएको लेखेका छन् । धेरैले भने गाली गरेका छन् ।‘दुर्गेश थापाको नयाँ गीत आएको रैछ, यसो सुनेको संसारकै उत्कृष्ट लिरिक्स रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड थाप्नुहुने भयो,’ एक प्रयोगकर्ताले फेसबूकमा लेखेकी छिन्, ‘यस्तो गीत गाउनुभन्दा मागेर खानु राम्रो ।’
२८३४७ पटक पढिएको
१०३६५ पटक पढिएको
८९८१ पटक पढिएको
८९५८ पटक पढिएको
८१५९ पटक पढिएको